Ungayifaka kanjani Ubuntu 13.10 Saucy Salamander igxathu negxathu | Kusuka kuLinux
Uma ungumuntu omusha kuLinux, kungenzeka ukuthi bakukhuthaze ukuthi uzame Ubuntu: ukusabalalisa okulula kakhulu nokusebenziseka kalula okuthi, ngaphezu kwalokho, kunesici sokubuka esinobungane (yize sehlukile kulokho ojwayele ukukusebenzisa kuWindows) futhi lokho kuzalwe ngenhloso yokwakha i- "Linux yabantu". Kulesi sitolimende esisha sichaza ukuthi ungayifaka kanjani Ubuntu 13.10 Saucy Salamander igxathu negxathu ... yebo, ukuze Dummies.
2 Ukufakwa kwesinyathelo ngesinyathelo
Ngaphambi kokufaka Ubuntu 13.10 kufanele wenze izinyathelo ezi-3:
Landa isithombe se-Ubuntu ISO. Uma ungazi ukuthi iyiphi inguqulo ongayilanda, ngincoma ukuthi ufunde lokhu kuqala isingeniso ukuthola imiqondo eyisisekelo ezokusiza lapho ukhetha noma yikuphi ukusatshalaliswa.
Shisa isithombe se-ISO kwi-CD / DVD noma ifayili le- shayela peni.
Lungiselela i-BIOS ukuqala ku-CD / DVD noma kwi-pendrive, kuya ngokuthi ukhethe ini esinyathelweni esedlule.
Ukufakwa kwesinyathelo ngesinyathelo
Lapho i-BIOS isilungiswe kahle ukuqala ebhuthini, qalisa kabusha umshini nge-pendrive endaweni. Ngemuva kwesikhashana, i-GRUB 2, Ubuntu load loader, izovela. Nazi izindlela ezi-2 zokuhamba. Kunconywa ukuthi uqale uzame Ubuntu ngaphandle kokufaka, ukubona ukuthi uhlelo lusebenza kahle yini; okungukuthi, uma i-hardware yakho ikuthola kahle, uma uthanda uhlelo, njll. Inketho yesibili ukufaka uhlelo ngqo.
Kulokhu, sizokhetha inketho Zama Ubuntu ngaphandle kokufaka.
Uma amabhuzu e-Ubuntu, chofoza isithonjana Faka Ubuntu 13.10. Iwizadi yokufaka izovela.
Into yokuqala ongayikhetha ulimi lokufaka. Khetha isi-Español, bese uchofoza inkinobho Faka Ubuntu.
Qinisekisa ukuthi uhlangabezana nezidingo eziphansi zokufaka ngokuchofoza Qhubeka. Kumele kuqashelwe ukuthi okuwukuphela kwesidingo esibalulekile ukuba nesikhala sediski esidingekayo.
Ukuba nokuxhumeka kwe-inthanethi kuyanconywa kepha hhayi imfuneko ekhethekile ngoba uzokwazi ukweqa ukulanda kwamaphakeji lapho kulungele wena.
Kuyanconywa futhi, nakuba kungesona isidingo esikhethekile, ukuthi uxhumeke kuphume ugesi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma usebenzisa i-laptop, ngoba inqubo yokufaka isebenzisa amandla amaningi futhi akuthathi ubuhlakani ukubona ukuthi akukuhle ukuthi umshini ucishe phakathi nendawo yokufaka, kakhulu uma Ibhekene nokufakwa kohlelo lokusebenza.
Ngokwengeziwe, kule ngxenye yokufakwa sinikezwa ithuba lokukhetha uma sizolanda izibuyekezo zesistimu lapho sifaka Ubuntu, inketho engingakhuthazi ukuyibheka ngoba ingabambezela inqubo yokufaka kakhulu.
Enye indlela ukulanda isoftware yomuntu wesithathu esivumela ukuthi sidlale okuqukethwe kwe-multimedia okungekho mahhala njengamafayela we-mp3 noma ukubuka okuqukethwe kwe-multimedia kuwebhu okwenziwe ngeFlash, njengoba kunjalo ngamavidiyo athile ku-YouTube noma imidlalo kumawebhusayithi afana Facebook.
Ngokwami ​​ngithanda ukufaka yonke le software ngesandla uma inqubo yokufaka isiqedile, kepha ayikho inkinga uma ufuna ukubheka le nketho bese uyenza ngesikhathi senqubo yokufaka.
Le yingxenye enzima kunazo zonke: ukwahlukanisa idiski.
Okokuqala, kufanele kucaciswe ukuthi isikrini singahluka kancane, ngokuya ngohlelo olusebenzayo noma amasistimu osuvele uwafakile kulowo mshini. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, uma unenguqulo endala ye-Ubuntu efakiwe, inketho yokuvuselela uhlelo nayo izokhonjiswa.
Kulokhu, ake sicabange ngesimo esijwayelekile: uthenge ikhompyutha, yafika neWindows 8, waqaphela ukuthi bekuwukukhwabanisa ofuna ukuzama okusha.
Nazi izindlela ezi-3 zokuhamba:
a) Susa uhlelo oludala lokusebenza bese ufaka: le inketho elula kunazo zonke: susa konke bese ufaka ngaphezulu. Akunasidingo sokushisa ikhanda lakho ngokuhlukanisa idiski noma yini enjalo.
b) Faka Ubuntu eceleni kweWindows: le nketho isivumela ukuthi senze ukufakwa okwabiwe ngokufakwa kwamanje kwe-Microsoft Windows, kusinikeza inketho yokwakha ukwahlukanisa kwe-Ubuntu Linux kusuka esikhaleni sediski samahhala esinomshini wethu, ngisho nokukwazi ukukhulisa usayizi wokwahlukanisa ngqo kusuka kungxoxo yesifaki.
c) Hlukanisa idiski ngesandla.
Uma ukhetha inketho yesithathu, i-disk partitioning parting izoqala. Ngakho-ke, lesi sinyathelo singakhethwa. Kunconywa kuphela kubasebenzisi abaphakathi noma abaphambili abaziyo ukuthi lokhu kusho ukuthini. Noma yisiphi isinyathelo esingalungile singaholela ekulahlekelweni kwedatha kudiski. Uma ungafuni ukubeka engcupheni, ungakwenzi.
Uma kwenzeka unquma ngale nketho, isincomo sami ukuhlukanisa idiski ibe izingxenye ezintathu:
1.- Ukuhlukanisa izimpande. Lapho uhlelo luzofakwa khona. Kufanele uyikhweze ku /. Ngincoma ifomethi yefayela le-EXT4. Usayizi omncane kufanele okungenani ube ngama-5 gig (2gb wesistimu yesisekelo nokunye okusele kwezinhlelo zokusebenza ozozifaka ngokuzayo). Ngiyaphinda ngithi, lobu ubukhulu obuncane, hhayi obulungile (okungaba yi-10/15 GB).
2.- Ukuhlukanisa ikhaya. Izoba kuphi yonke imibhalo yakho. Kufanele uyikhweze ku / home. Ngincoma ifomethi yefayela le-EXT4. Usayizi ukuzikhethela komuntu siqu futhi kuncike kuphela ekutheni uzowusebenzisa kangakanani.
3.- Ukuhlukanisa eguqulayo. Isikhala esigciniwe kudiski sememori yokushintshana (uma uphelelwa i-RAM isistimu isebenzisa lesi sikhala sediski ukuyikhulisa). Le ngxenye ayikwazi ukushiywa futhi kufanele ibe khona yebo noma yebo. Usayizi onconyiwe ngu: a) wokwahlukaniswa kwe-1gb noma ngaphansi, ukushintshaniswa kufanele kube yimemori yakho ye-RAM ephindwe kabili; b) okwehlukanisweni kwe-2gb noma ngaphezulu, ukushintshaniswa kufanele okungenani kube yi-1gb.
Lapho konke sekumi ngomumo, chofoza KULUNGILE bese uhlelo luzokubuza ukuthi uyavumelana yini noshintsho.
Chofoza ku- Faka manje. Into yokuqala kuzoba ukukhetha izoni yesikhathi:
Into elandelayo esizoyilungisa ikhibhodi. Ungakhohlwa ukuhlola ikhibhodi oyikhethile (okhiye abayinkimbinkimbi ikakhulukazi abanjengo ñ, ç ne-Altgr + inhlanganisela ethile yokhiye). Uma ingasebenzi kahle, zama ezinye izakhiwo zekhibhodi.
Ngemuva kokumisa ikhibhodi kuza ukumiswa komsebenzisi.
Kumele ufake igama lomsebenzisi nephasiwedi, igama lekhompyutha bese unquma ukuthi kuyadingeka yini ukucela iphasiwedi ukungena ngemvume. Ukusuka lapha kungenzeka ukuthi ubethele ifolda yomuntu siqu, engingayincomi (ngoba inganciphisa uhlelo) ngaphandle kokuthi ukhathazeke kakhulu ngokuphepha kwemibhalo egcinwe kulowo mshini.
Ekugcineni, isikrini esizokwakha i-akhawunti ku-Ubuntu One, insizakalo yokugcina ifu leCanonical, sizovela. Uma kwenzeka ungafuni ukuba ne-akhawunti ye-Ubuntu One noma ufisa ukuhlehlisa leso sinqumo, mane uchofoze inkinobho Ngena ngemvume kamuva.
Ngemuva kwemizuzwana embalwa, ikhophi lefayela lizoqeda. Okwamanje, ungajabulela ezinye izithombe ezibonisa ezinye zezinzuzo ze-Ubuntu.
Lapho konke sekumi ngomumo, ungaqala kabusha noma uqhubeke nokuhlola uhlelo.
Ekugcineni, qala kabusha bese ususa i-disk noma i-pendrive oyisebenzisile.
Lapho usuqale uhlelo, ngincoma ukuthi ubheke umhlahlandlela wethu Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka Ubuntu 13.10 ukuyilungisa.
Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka Ubuntu 13.10
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Ungayifaka kanjani Ubuntu 13.10 Saucy Salamander igxathu negxathu
Kuhle kakhulu, kepha ikhasi le-distros linjalo lapha. Endala ayisasiqondisi kabusha.
Ngiyabonga kakhulu ngokubona kwakho. Benginganakile. Sengivele ngenze izinguquko ezidingekayo. Manje izixhumanisi zikhomba kahle. 🙂
Uthole i- "Ubuntu 12.10" engene ezindaweni ezimbalwa.
Into enzima kakhulu ukufaka ubuntu kumuntu omusha ukwahlukanisa.
Ngiyabonga! Sengivele ngalungisa. 🙂
umbuzo uma ngingafuni ukusebenzisa ukushintshana ngoba i-pc yami inezinkumbulo eziyi-8 zenkumbulo yenqama lokhu kungathinta uhlelo
Impendulo ithi cha .. inqobo nje uma ungeke usebenzise imemori engaphezu kuka-8 GB… cha?
Uma ufuna ukuhlela amavidiyo noma ukudlala imidlalo yevidiyo, njll. hmm .. Angiqiniseki kangako ukuthi umqondo omuhle ukungasebenzisi ukushintshaniswa.
Lokhu akulona iqiniso, ukuhlela ividiyo kungamagama asebenzayo kuyafana, uma uqala ukusebenzisa i-SWAP kuba nzima ukuhlela ividiyo, ngenxa yokuthi ihamba kancane kangakanani.
Kumageyimu awunangqondo, lawo anzima kakhulu anezidingo eziphansi ze-2 GB ye-RAM ne-4 noma engafika kwezingu-8 kuma-64-bit system (Izinkumbulo ezabiwe nohlelo olusebenzayo nezinhlelo ezisebenza ngemuva), kepha empeleni leyo midlalo neze idlule kokudla u-2 GB futhi ngiyangabaza ukuthi kukhona okufinyelela lokho kuzinhlelo ze-GNU / Linux
Uma kungakuthinta, ukushintshaniswa kuyasetshenziswa nasenqubeni yokufihla i-pc, kunconywa ukuthi, uma uzosebenzisa lo msebenzi, usebenzise okungenani inani elifanayo lokushintshana njengenqama.
Ngalelo nani lenqama, kujwayelekile ukucabanga ukuthi awusoze waligcwalisa, kepha uma inqama eningi iba nezinto eziningi, sifuna ukwenza okuningi, futhi uma kungenzeka ukuthi igcwele, uma kungekho ukushintshaniswa, uhlelo luyaphuka phansi, akudingeki ukuthi ubeke isikhala esincane kwi-hdd yokushintshana.
Kunjalo ... umngani uCesar uqinisile ...
Lolo lwazi lubonakala ngathi luthathwe kunoma yisiphi isithangami emuva ngo-2004 lapho amakhompyutha ama-2 GB ayeseyintsha.
Akukho ndawo lapho kubucayi khona kanye nezimpikiswano zobuchwepheshe okunganconyelwa ngaphezu kuka-2 GB we-SWAP, futhi ngemuva kuka-4 GB kuyenzeka ukukhubaza.
Njengoba i-KDE isebenzisa imishini engu-2 ebonakalayo, i-firefox enamathebhu angaba ngu-10, ukudlala i-amarok ne-vlc enevidiyo engu-720p ayifinyeleli ku-5 GB. Kunesikhala esanele ngaphezu kokulalisa okokusebenza.
Kuyinto eyodwa ukulala ubuthongo nokunye ukumisa okwesikhashana. Okokuqala, izinkumbulo ze-RAM ziyaguquguquka, lawo magama alula asho ukuthi adinga amandla okugcina idatha engaphakathi kwawo, ngakolunye uhlangothi ama-HDD awuhlobo lwememori engashintshi, ngakho-ke uma ecishiwe agcina imininingwane yakho.
Inqubo yokumisa isikhashana icisha yonke imishini yakho, ngaphandle kwezinkumbulo ze-RAM. Inqubo ye-hibernation ivala yonke i-PC yakho, ngisho ne-RAM, kepha qala ukuyigcina ku-HDD. Lapho okokusebenza kuvuliwe, lesi sipele sibuyiselwa ku-RAM.
Manje, angazi nakancane ukuthi isipele sigcinwa kuphi ku-HDD, uma kukushintshanisa okuchaza ukuthi kungani ngingenakukwenza embizeni yami.
Este Ngenye yezindawo lapho ngithole khona ukuthi isihloko sichazwe kahle kangakanani (futhi akusona isithangami esivela ku-2004 ...)
Ukushintshaniswa kwakucatshangwa ngezikhathi lapho inqama yayiyindlala futhi ibiza kakhulu. Namuhla ukusetshenziswa kwayo kusebenza kakhulu kumaseva noma imisebenzi enzima kakhulu. Uma usebenzisa i-gentoo kwikhompyutha enesizotha, uzoyisebenzisela kakhulu ukuhlanganisa kanye nenqolobane. Kumakhompiyutha wanamuhla noma kumaseva ezimeni kuphela lapho ngabona khona ukuthi ngiqale ukubhala kwakukhona imininingwane, noma ngisebenzisa i-VMware (okuyindlela exwayisa njalo). Kungcono ukushiya ama-gigs amaningi wokushintshana ukuze iseva egcwele ngokweqile ihambe kancane kancane, ngaphambi kokuthi yehle ngokuphelele, okuyilokho okwenzekayo uma ingasekho inqama.
Ngiyethemba angizwakali ngisinda, kepha angiqondi inhloso ye-athikili, lapho sekuvele kunezinkulungwane zemihlahlandlela yonke indawo (ngisho nalapha), futhi ikakhulu lapho inqubo yokufaka ifana kusuka kwezinye izinhlobo emuva. ..
Inhloso yendatshana eyenzelwe abantu kuGoogle "ukuthi bangayifaka kanjani Ubuntu 13.10 Saucy Salamander."
Ngiyabonga ngempendulo, uma kungakukuningi ukubuza, kungakuhle ukubhala ngokumele ukwenze ngemuva kokufaka ukubuntu 13.10, cishe akukho okuthunyelwe ngalokhu ku-google ... ngoba njengamanje ngisebenzisa ukubuntu futhi bengizokwenza ngithanda ukuyishiya ngemuva ...
kulungile. Ngizocabanga ngakho! 🙂
Awudingi okuthunyelwe kwalokho, ufaka okungeziwe okunomkhawulo kubuntu, futhi manje… ..: / futhi uma ufuna i-vlc, awudingi ukwenza okunye.
Ubuntu kungenzeka i-OS ene-spyware nezinto ezinjalo, kepha ubuntu buhle kancane ngemuva kwakho konke.
Ngisanda kuzama uDebian ku-Acer Aspire One yami ngakho-ke ayingibheki:
Bekungukuxakaniseka okukhulu ukuwenza usebenze, kunginikeza amaphutha amaningi, yingakho ngisebenzisa i-Elementary OS ngoba i-PC yami yedeskithophu ilimele 🙁 futhi kufanele ngisebenzise le netbook M **** ene-Ubuntu based distro.
UFedora, ukuphela kwakhe osebenza konke kodwa bekunamathele kakhulu kwi-netbook yami.
Ukubingelela nokubonga ngeposi Pablo!
* Ungaboni Ungacabangi kabusha
Iphutha lesichazamazwi sami se-firefox xD
Wamukelekile! Ngiyabonga x comment!
Imvamisa ngenza ukwahlukaniswa kwe-4 disk. / impande. / ekhaya. shintsha. kanye / ne-boot kokugcina ngiyabona ukuthi akuvamile kakhulu kwamanye ama-distros.
akuvamisile ukunconywa, yize kushiwo encwadini yesandla ye-gentoo
Kwa-Arch ngicabanga ukuthi bayayincoma nayo, uma inkumbulo yami ingisebenza kahle.
JCSenar - linuxirun.com kusho
Kubonakala kimi ukuthi okokufundisa kwenziwa emshinini obonakalayo we-Windows 8. Ukube bekukhompyutheni entsha ene-Windows 8 efakwe ngaphambili, ngabe bekufana noma bekuzodingeka ukuguqula okuthile ngaphambilini ku-BIOS / UEFI?
Ngibonga kusengaphambili, ngokuqondene
Phendula ku-JCSenar - linuxirun.com
Sawubona, kuhle kubo bonke abantu. Ngibe nokungabaza okumbalwa okuhlobene nalokho ebengifuna ukufaka i-OS yami kuma-bits angama-64.
Nginelaptop ye-ram engu-3gb futhi ekuqaleni bengifuna ukuthuthela kuma-bits angama-64 (uma bengangeluleki kunjalo) kepha… Nginamafayela nezinhlelo eziningi. Engikuthanda kakhulu ukukugcina yimishini yami ebonakalayo cishe eyi-7, kepha-ke ikumabhithi angama-32. Imibuzo yami ekuqaleni ...
Ngabe imishini ebonakalayo ye-vbox ibisazongisebenzela noma ngineminyaka engama-32? Futhi owesi-2 uthi: kungakuhle ukuthi ngiwuphathe uye kuma-64? Ngiyabonga kusengaphambili niyizinkanyezi zangempela
Mayelana nemibuzo yakho:
1) Ngokwazi kwami, bekungeke kube nankinga ukuba nomphathi we-64-bit nemishini ebonakalayo engama-32-bit.
2) Yebo, nge-3 gb yenqama ngincoma ukuthi uye kuma-bits angama-64. Ngaphandle kwalokho ubungeke ukhiphe lonke ijusi emshinini wakho, ikakhulukazi uma usebenzisa izinsiza eziningi.
Ngiyabonga kakhulu Pablo!
Kuyintokozo enkulu ukukufundela, nina nobabili nabo bonke ababhala kuleli khasi elihle kangaka. Sanibonani eta ondo ibili! 🙂
Ngokuphambene nalokho, uLander. Ukwanga okukhulu! UPaul.
Umbuzo owodwa ... Ngokukunikeza ezinye izinketho, Ingabe inketho yokufaka Ubuntu kwimodi yombhalo? Njengoba ukuphela kwendlela engisebenzele ukufaka Ubuntu ngaphandle kokucela i-Intanethi (ngamanye amagama, ukufakwa Off-line).
Ingabe i-inthanethi iyakubuza? eh, okuxakayo, ngivele nginqamula i-Ethernet futhi angixhumi ku-wifi bese ngiyifaka ngaphandle kwe-inthanethi
Kuyathakazelisa kepha ngihlala noDebian 🙂
Ngabe ukhona owaziyo ukuthi iMint-KDE Petra izophuma nini?
Okwenzekayo ukuthi ngithanda ideskithophu ye-KDE namaphakeji we-.deb futhi sekuvele kwenzeka kimi kumishini eminingana lapho lapho ngifuna ukufaka i-Kubuntu 13.10 ka-32 noma i-64 isikrini ngemuva kokuthi i-ksplash ihlale imnyama ... ayikho indlela suka lapho, hhayi ngisho nase-boot nge-nomodeet.
Ngizamile ngeKubuntu 13.04 futhi akunankinga, ngokufanayo ngeNetrunner 13.06 bayifaka futhi bayisebenzise; futhi ngibheke nge-OpenSUSE, Mageia, Chakra, Kaos futhi ayinikezi nkinga futhi, zifakwe ngemidwebo kepha ayikho indlela yokuthi uKubuntu 13.10 edlula esikrinini esimnyama. Ngizamile inguquko ye-14.04 futhi angikwazanga ukuyifaka, isikrini simnyama futhi uma kunjalo manje; akunandlela yokuthi bakhuthazwe ukuthi bayisebenzise futhi batholakale kangcono kokunye ukwabiwa.
Ngikushiyile ukubonwa ezinkundleni zokuxhumana zeKubuntu futhi ngikubika njengesiphazamisi kepha nabo abanginikanga impendulo.
Ngingafaka kanjani ngaphandle kwalesi sikrini esimnyama?
Umngani lapho ufaka Ubuntu, lapho ngiqala kabusha ikhompyutha ngithola iphutha elingu-14, sengivele ngilixazulule.
Ngifuna ukwazi ukuthi kungani?
Imininingwane ewusizo kakhulu nemininingwane yesinyathelo ngesinyathelo.
Nginemibuzo embalwa: Uma ngifaka inketho "Faka Ubuntu eduze kweWindows", akudingeki yini ukwahlukanisa noma yini? Ingabe lokho kulula ukuthi ube nezinhlelo zombili?
Omunye umbuzo uthi ngingakwazi yini ukufaka le nguqulo ye-Ubuntu kwi-PC yami, ngaphandle kwephutha le-initramfs, ngoba ngenguqulo engu-12.04 angikwazi ukuyifaka, ngingayifaka kuphela nge-Wubi, kepha iphonsa kimi amaphutha kaningi. Ukufakwa kwe-12.04 ngikwenza ngePen Drive, ngikwenze ngomthamo omncane weNetbook futhi kwenziwe ngokuphelele, kepha kudeskithophu yami angikwazi. Ngakho-ke bengifuna ukwazi ukuthi noma kunjalo ngo-13.10 iphutha le-initramfs lizolandela
Ngiyabonga kakhulu kusengaphambili futhi siyakuhalalisela nge-blog.
Mayelana nombuzo wakho wokuqala, kulula njengokuthi ... Ubuntu uzonakekela ukwahlukaniswa okuhambisanayo.
Mayelana nowesibili, angikwazanga ukukutshela ukuthi ngabe lelo phutha lilungisiwe ngo-13.10.
ibhola le-bocce kusho
Namuhla yiSonto, ngo-10: 20 ekuseni. Kusukela izolo ntambama, lapho ngigcine ngikholisekile ukuthi iWindows 7 inika izinkinga eziningi kunezixazululo futhi lokhu kwenzeke kimi ezinsukwini eziyishumi nanhlanu zokugcina ngemuva kokufaka "konke", i-Adobe CS6 ephelele, ihhovisi eligcwele 2014, i-antivirus entsha (i-BitDefender) nokuba kukhubaze idiski yohlelo usuku nengxenye, ngacabanga ukuthi izinkinga seziphelile. Kepha cha, babeqala nje.
Phakathi nesonto, ngifuna okuthunyelwe okuzochaza impande ye-quilombo yami, ngihlangane nabantu abasebenzisa iLinux amahlandla amaningi, iningi labo line-UBUNTU, futhi nginqume "ukucabanga ngakho ... ngokujulile."
Ngangihlala nginokuncane ukunengeka kokuthuthela izinhlelo zokusebenza engingazazi. Ohambweni, uvame ukuhlulwa futhi lokho ogcina ukunqoba akukwenzi lokho okulahlekile.
Ngiyinkabi endala, (65) futhi ngivela esikhathini samakhompyutha anesisindo esingamathani amabili nenqama engu-16k. (IBM 30 systems) futhi kwakudingeka ukuthi kusebenze ebusuku ezikhungweni zekhompyutha ukuqinisekisa ukuzinza kwamandla nezinga lokushisa. Yilapho kwaqala khona konke lokho.
Ubuntu, ngokombono wami othobekile nobuntu bami, bumunca nomaphi lapho ufuna ukuyibuka khona.
Angikwazanga ukuyifaka, ngenza izinyathelo ezikhonjiswe ngokuqinile ngaphandle kokulahlekelwa imininingwane. Kugcina ngokuthi GRUB -INSTALL yehlulekile. Leli iphutha elibulalayo!
Ngemuva kokuthi unenketho yokushintsha indawo yokufaka, futhi noma ngabe ukhetha ini, uphawu oluncane olunemvelaphi emhlophe enezinhlamvu ezimnyama luhlala luvela njalo. Kunamahora amaningi nemathanga amaningi okufaka le crap, ngamafuphi nje, angazi nokuthi yenzelwe isihogo sini, uma iningi lezinhlelo engizisebenzisayo zingasebenzi ku-Linux nakuma-subsides abakunikeza wona ( okungenani ekuphathweni kwezithombe) bangobhanana.
Manje ngizokutshela ukuthi yini inkinga yami yamanje, ukuze nje uyigcine engqondweni, uma kwenzeka uza nesixazululo futhi ufuna ukungidlulisela kuso.
Njalo lapho ngiqala iWindows, inketho ye-UBUNTU iyavela futhi angifuni ngempela ukulifunda lelo gama empilweni yami noma okusele kulo.
Ngikuthola kanjani lokho kukhetha ku-Windows boot?
Kubukeka njengesiphazamisi nge-GRUB
Mhlawumbe lokhu okuthunyelwe kuzokusiza:
Ngizamile ukufaka ubuntu13.10 futhi ngathola isikrini esimnyama esithi grub> futhi akwenzekanga ukusuka lapho, angikwazanga nokuzama.
Ngizamile ubuntu 12.04 lts futhi sengivele ngiyizamile ngokumangalisayo.
Kuthiwani ngo-13.10? kungani leli phutha futhi lilungiswa kanjani?
Mhlawumbe lokhu okuthunyelwe kwakudala kungasetshenziswa:
Sawubona ngiyethemba uphilile. Umbuzo wami wokuqala uthi, ngabe uyilungisile? Uma ngingafuni ukwazi isithombe ukuthi usilande kuphi nokuthi usirekhode ngamuphi umshisi? Futhi uma ukwenze ku-tmbn pendrive usebenzisa luphi uhlelo lokusebenza? Kungenxa yokuthi lapho sinohlelo olukhawulelwe ekulandweni futhi lokhu ngokuzenzakalela kusithinta ngaleyo ndlela futhi silulande ngokungaphelele. Futhi uma sikusebenzisa ukuqopha, kubi kakhulu; Futhi ngabe ubususisebenzisile leso sithombe kwenye i-PC? Ngiyethemba ukuthi ngingasiza kancane. Ozithobayo.
Okokuqala, awazi lutho ngeLinux, yingakho uzichaza kanjalo ... ukuthi konke kudinga ukufundwa kanjani; Bhala phansi, wenze, izixazululo ekuvivinyweni nasephutheni ezimweni ezimbi kakhulu, kepha ngokuqonda okuhle konke kungenzeka. Zibeke ekwenzeni ubuchopho bakho busebenze.
Ngempela ... Ku-65, udokotela onesipiliyoni seminyaka engama-37 ekuhlinzweni okuyinkimbinkimbi kakhulu, enezidokotela ezimbili, ukuthi umfana owazi iLinux, ungiphatha njengesilima esivila, okungaphezu kokucasula, kunginaka. Ngalesi sikhathi empilweni yami, (noma ngaphambili), into yokugcina engenzeka kimi ukuthatha inkambo yeNerd. Bathole umfana omubi wokucindezela. Ngaphezu kwalokho. Uma ngidinga ngempela ithuluzi leLinux (engikungabazayo), ngiyaya ngilithenge. Udaba lwe-Ubuntu lwalunjengoba ngangikuchazela lona futhi izizathu ezangenza ngazama ukuyifaka azihlangene nesidingo sokuthi "sifunde iLinux" kuqala. Eqinisweni, Ubuntu, enye yezinto egcizelela iziqubulo zayo zokusatshalaliswa, ubungane nokuguquguquka kokubili kokufakwa kwayo, kanye nokusebenzisana nokusebenza kwayo. Ngakho-ke, uzongitshela ukuthi "ngisebenzise ubuchopho bami ukuthi busebenze", kuzofanele sihlole ukuthi eyakho isebenza kangakanani ngaphandle kweLinux. Angicabangi ukuthi ngisho nokuyicindezela kuzokwenza ihambe. Lokhu kuvame ukwenzeka eNerdolandia.
Ukubingelela okuvela ku-cotolengo.
U-Adrián: Ngikhohliwe ukukutshela eminye imininingwane emincane, hhayi engaphansi. Noma iyiphi isoftware, kakhulu olunye uhlelo lokusebenza, njengoba kunjalo futhi njengoba kusobala, lapho kukhulunywa "ngokufuduka". Kungabaluleka kwabokufika ku-Ubuntu, ukuthi bangabi nayo imibhalo, njengoba usho, kepha ngemiyalo ebhekiswe kubasebenzisi bamanye ama-OS, ukuze lezi zinhlobo zezimo zingenzeki, ekugcineni "ezigomela" i-Ubuntitis uhambo lomhlaba. Ngemuva kwesipiliyoni sami esingesihle, ngihlangane (ngendlela efanayo phambilini, ne "ubunteros"), nabantu abaningi abake bafana nami. Manje ngisanda kuxoshwa ngumlobi "wombhali" kanye nesixhumanisi sayo, ukuthi ngokusobala kunenkinga ngabashayeli bamakhadi amabili (njengoba kunjalo kimi). Lokhu akufanele kwenzeke, uma Ubuntu iyazi inkinga, kufanele iyiveze ukugcina abasebenzisi bayo abangaba khona abavela kwenye i-OS besesikhathini
Ngabe ubonile iMicrosoft, noma yimuphi umsebenzisi weWindows, noma i-DOS encoma njengesixazululo ezinkulungwaneni zama-quilombos alethwa yi-MS, ukuthi "ayofunda i-DOS"?, Noma uma kwenzeka i-PHP, i-HTML, njll. Ngubani ofunda lezo zinto, kungenxa yokuthi bahlala noma basebenza ngalokho. Kepha ngakolunye uhlangothi kukhona abasebenzisi, abasebenzisi abalula abadinga kuphela i-interface phakathi kohlelo kanye nabo uqobo. Cabanga ukuthi uma ngelinye ilanga uya esibhedlela (uNkulunkulu ethanda lokho) nodokotela osemsebenzini akutshele ukuthi ukuze uthole impumuzo, kufanele uye ekolishi wenze iminyaka eyisithupha yezifundo ukuxazulula ubuhlungu beqanda langakwesobunxele elikukhathazayo ?
Kufanele ngabe umncane kakhulu. Iseluleko sendoda endala: Yehlisa ukucabanga kwakho futhi wandise isizathu sakho.
Kunjalo, bocha. Kungenzeka iLinux iswele ukuthi ibe "nobungane ngokuphelele". Noma kunjalo, uma ucabanga ngakho ngokufanele, kulezi zinsuku akudingeki ube isazi sokuyifaka. Kungahle kube nezimo ezithile lapho izinto ziba nzima khona, kepha imvamisa kuyinto ehlukile hhayi umthetho. Ngendlela efanayo eyenzeka ngayo kwiWindows futhi uchitha izinsuku zonke uzama ukufaka umshayeli noma ukulungisa izinhlekelele ezibangelwe yigciwane le-X emshinini wakho, njll.
Ngaleyo ndlela, uma unezinkinga nge-Ubuntu, ngimane ngincoma ukuzama okunye ukusatshalaliswa. Lokho futhi kuyingxenye yobuhle beLinux. Isibonelo, ngibe nezinkinga ngekhamera yami yewebhu ku-Ubuntu futhi bekungenakwenzeka ukuthi isebenze. EManjaro ngangiyinto eyisimanga.
Enye into, uma usaqala nje, angincomi Ubuntu (noma ngabe kufanele kube yi-newbie distro), ngiphakamisa ukuthi ngizame iLinux Mint noma iLubuntu esikhundleni salokho. Ikakhulukazi i-LM isivele iza nakho konke okufakiwe nokulungele ukusetshenziswa.
Lapho-ke siqondiswe kancane. Noma kunjalo, okwamanje (okwamanje nje), ngiza nezinkinga ezixazululwe ngokwama-flakes e-W7. Futhi, empeleni konke engikufakile kulungiselelwe, kwasetshenziswa futhi "kwaqeqeshwa" cishe ngokuningiliziwe. Ukube benginenye ikhompyutha yedeskithophu (enye eyengeziwe), bengizokhuthazeka ngokuzumayo ukuthi ngidlale okuncane ngezinye izindlela, ngizizame ngaphandle kwezingozi. Kepha akunjalo. Kukhona ikhompyutha eyodwa futhi ekhaya, yimina ngedwa ongena kule tafula. Ngakho-ke, esimeni esiphuthumayo, anginabani engiphendukela kuye ngokushesha, nezingozi kulolu daba, uyazi ukuthi zenzeka lapho kungafanele ukwenzeka: ngezimpelasonto, ebusuku, izinsuku zemvula, njll.
Ukuphela kukagesi unomphela, ukufakwa kwamandla okungazelelwe futhi okuphambene nalokho, ukunqamuka kwensizakalo yekhebula, nezinye izifo zikazwelonke kungukuhlanganisa okungathenjelwa kukho.
IWindows, okwamanje, ifana nokuthi iyaziqonda lezi zinkinga futhi iyalulama, yenza amakhophi wesipele futhi kunamakhulu amathuluzi okulungisa nokubuyiselwa kwedatha okwehlulekayo noma amaphutha amakhulu, futhi lokho futhi kufanele kufakwe esikhwameni ukuze kuhlolisiswe kahle. Vele, iLinux kufanele ibe nokufanayo noma okuningi mhlawumbe. Kepha njengoba u-Adrián asho, "kufanele umazi, ufunde, njll." Futhi kulapho kuvela khona intaba yokuziphendukela kwemvelo. Asikho isikhathi sokuthola lokho. Ngokungazelelwe, uma nginesikhathi esincane sokulondoloza, (njalo kule ndaba), ngiyisebenzisela ukuthuthukisa noma ukufunda ukusebenzisa izinhlelo enginazo, ngandlela thile, kungaba ngezifundo ze-YouTube, ezinemihlahlandlela eku-inthanethi, noma amabhuku athengwe esitolo sezincwadi, omunye uyahlehla, ngoba ngamafuphi nje, yonke into isebenza kungxenyekazi efanayo, ifolda iyifolda, idiski enzima ukuthi, ukwahlukaniswa kwenziwa kalula kusuka kumphathi wediski ngaphandle kwesidingo sesoftware, ngendlela efanayo, amadivayisi ayasulwa noma akhanselwe, kanye ne-etcetera ende. Olunye uhlelo lokusebenza, hhayi iLinux, noma yini, idinga ukufunda konke lokho futhi. Yize inembile, ayikaze ibe njalo emhlabeni jikelele. Vele, kulabo abavela kuLinux, noma olunye uhlelo lokusebenza olususelwa kuzakhiwo, ubunzima buncane, ngoba kunendawo yokujwayela. IWindows, kusuka enguqulweni yayo yokuqala, eyayiyihafu ye-DOS nenye "noma yini" ngaleso sikhathi. Yayithuthukisa izinhlobo ngokuya ngombono womsebenzisi, futhi leso yisona sizathu esikhulu sokuthandwa kwayo, kanye namaphutha ayo amahle, izikrini eziluhlaza okwesibhakabhaka, amagciwane, okungalindelekile, izifiso, njll. Kuleli qophelo, umuntu kufanele akhethe ngokuya ngalokho akudinga ngempela futhi akwazi.
Ngiyabonga ngolwazi. Ngizokugcina engqondweni.
Yebo, kuliqiniso ukuthi kufanele ufunde kancane, kepha njengakho konke, akunjalo?
Akukho okuhlinzekwa ngokuphelele.
Uma kusiza, ngikushiya lezi zixhumanisi nemihlahlandlela eyenzelwe ikakhulukazi i- "newbies" ku-Linux:
Ngiyabonga kakhulu ngezinkomba zokufakwa okuhle kakhulu. Okuthunyelwe okuhle kakhulu kuchazwe kahle.
Ingelosi Valdecantos kusho
I-Ubuntu 13.10 yami ibona i-Samsung 6000 series TV kepha i-TV ayisazi isignali ye-HDMI evela kwi-laptop. Asikho isithombe futhi akukho umsindo.
Ngizamile ukushintsha ikhebuli kodwa akwenzeki lutho.
Sesha emhlabeni wonke futhi kubonakala sengathi iningi linezinkinga ngama-TV e-LED amasha.
Ngicela, unginike isixazululo?
Phendula ku-Angel Valdecantos
UPablo Ernesto Grisancich kusho
Angazi kahle ikhompyutha, kepha ngithemba ukujwayela i-Linux Ubuntu ngokushesha
Phendula uPablo Ernesto Grisancich
UDaniel F Serrano kusho
Kulesi sitolimende esisha sichaza ukuthi ungayifaka kanjani i-Ubuntu 13.10 Saucy Salamander igxathu negxathu ... yebo, ngama-dummies.
3. Lungiselela i-BIOS ukuqala kwi-CD / DVD noma kwi-pendrive, kuya ngokuthi ukhethe ini esinyathelweni esedlule.
Le misho emibili ayihambelani, namanje angikwazi ukuthola i-W XP yami, i-Home Edition, inguqulo 2002, i-Service pack 3, i-boot kusuka ku-pendrive, okungukuthi, ayinginikezi leyo nketho, ngaphakathi kwe »SetUp», »Kuthuthukile», »Ukulandelana Kusuka Ekuqaleni», kunezinketho ezi-4: »Amadivayisi Asusekayo», »I-CD-Rom Drayivu», I-Hard Drive », Idivayisi Yenethiwekhi», ngikhetha «Amadivayisi Asuswayo», kepha ngeke ivuleke.
Phendula uDaniel F Serrano
Sawubona! Ngicabanga ukuthi ushiya ipendrive uma uqala, akunjalo? Uma kunjalo, kungenzeka ukuthi ufake i-Linux ngokungalungile ku-flash drive.
Ngincoma ukuthi ubheke i-athikili elandelayo:
Sawubona Pablo, ngiyabonga ngokunaka kwakho, futhi ngiqale ukufaka i-Ubuntu 13.04, ngiyilayishe ku-pc yami, ngilayisha i-UntBootin, ngalolu hlelo ngiyithumele ku-USB, ngaphandle kokuyikhipha, qala kabusha i-pc yami, shintsha i-boot ukuze uyenze kusuka ku-USB yami, kwavela lesi skrini esilandelayo: «SYSLINUX 4.03 2010-10-22 EDDCopyrtight (C)
1994-2010 H Peter Anvin et al »; futhi emugqeni ongezansi: _ ukubenyezela. lokhu sekuvele kuthatha ihora elingu-1/2
Kungani kunzima kangaka ukusebenzisa le ndlela enhle kwi-Windows XP? Ngemuva kwemizamo emithathu engaphumelelanga, kusele kuphela ukuqala ukonga ukuthenga iWindows 7. Uma kungokwama-nerds kuphela »kuzoba nzima kakhulu ukuzibeka njengenye indlela yangempela ku-Windows.
Ngiyaphinda ngiyabonga ukunakwa kwakho,
Sawubona Daniel! Bheka, isisombululo "esilula" kungaba ukuzama enye i-distro. Isibonelo, ngeLinux Mint, nayo enconyelwe i- "newbies." Ngaphandle kwalokho ungazama uLubuntu.
Ngikushiya isixhumanisi ongasithakasela: https://blog.desdelinux.net/5-opciones-para-migrar-de-windows-xp-a-linux/
Sawubona Pablo, ngiyabonga futhi, kepha kubonakala sengathi i-pc yami ivimba noma yikuphi ukufakwa kwe-Ubuntu; Ngingathanda ukwazi ukuthi ngabe kukhona yini okukhethwa kukho okungafakwa ngaphandle kwe-Unetbootin? ayisebenzi kimi nganoma iyiphi i-distro.
Nakhu okunye okuchaziwe: http://www.ubuntu.com/download/desktop/create-a-usb-stick-on-windows
Ungasebenzisa futhi lesi sixhumanisi: https://help.ubuntu.com/community/Installation/FromUSBStick
Sawubona Pablo, ngiyabonga kakhulu ngesixhumanisi »yakha induku ye-USB emawindini, ngayo sengivele ngilandwe i-Ubuntu 13.04 yami, kungekudala izofakwa esikhundleni se-WXP esethathe umhlalaphansi nangendlela engisusa ngayo i-IE eyingozi: Nginombuzo, Ubuntu, kubha emile ngakwesobunxele, ezansi, ngaphansi kwe- "system configuration" ingikhombisa isixhumanisi esibizwa nge: 60Gb volume, lapho wonke amafayela wami we-Wxp ekhona, ukuze ngikwazi ukufaka Ubuntu ngokususa i-Wxp, futhi anginaso isipele amafayela wami we-Wxp?
.- Lapho ngithola khona ikhibhodi ye-laptop yami ku-Ubuntu, inikela kuphela ngekhibhodi yedeskithophu, ngiyabonga futhi, ngijabule kakhulu.
Mayelana nombuzo wakho wokuqala: njalo yenza isipele ngaphambi kokwenza into enjalo! Akunandaba ukuthi uqiniseke kangakanani ukuthi ukufakwa kweLinux ngeke "kuqhubeke" imininingwane yakho.
Ngikisela ukuthi ufunde le ndatshana: https://blog.desdelinux.net/distribuciones/ lapho kuchazwa izindlela ezahlukahlukene zokufaka i-Linux.
kuhle ngifaka ubuntu 13.10 futhi kunginikeza iphutha futhi kusho lokhu: Ayikwazanga ukubuyisa ifayili lokufaka elidingekayo. umbuzo wami uthi, ngabe yiphutha lesikhathi sokusebenza noma iphutha lokurekhoda ku-cd / dvd, ngithanda ukuthi ungiphendule ngokungathi sína ngokushesha ngicela
Sawubona Carolina, ngibonga uPablo ongithumele isixhumanisi esingezansi ngikwazile ukudala i-USB yami efunda iWindows Window XP yami engasasebenzi, nayo ingakusiza, ngoba nge-Unetbootin ngacishe ngayeka iLinux.
Umhlahlandlela omuhle kakhulu, ungisizile kakhulu kubaqalayo 😀
qhubeka, wabelane ngolwazi 🙂